२०८५ सालसम्म प्रधानन्यायाधीश ‘प्याक’ | Lifemandu
| मंगलबार, २९ जेष्ठ, २०७५
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वाेच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक प्रावधान छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा २०७३ साउन १७ गते थप ११ जना न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। यसरी नियुक्ति हुने न्यायाधीशमा दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे रहेका छन्।
त्यसै गरी शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरीप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनीलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल हुनुहुन्छ। २०७६ साउन १८ देखि कार्कीसहित ९ जना न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशका दाबेदारका रूपमा रहनेछन्।
न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारी २०७३ माघ १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को समयमा नियुक्ति भएको देखिन्छ भने न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, डम्बरबहादुर शाही र टंकबहादुर मुक्तान २०७४ असोज २४ गते नियुक्त हुनुभएको हो।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला श्रेष्ठ, शाही र मुक्तान नियुक्त हुनुभएको देखिन्छ। उमेर हदबन्दीले नछेक्ने हो भने प्रधानन्यायाधीशको पदावधि छ वर्षको हुनेछ। ६५ वर्ष पूरा भएमा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद स्वतः रिक्त हुने नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख छ। नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय आज, प्रधानन्यायाधीशले ‘साथी’ भनेपछि हंगामा
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको सुनुवाइ बिहीबार सकिएको छ । संसदिय सुनुवाइ समितीको विहीबार वसेको वैठकमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशीले आफूमाथि उठेका प्रश्नहरु र उजुरीको जबाफ दीएपछि सुनु
किन अल्झियो प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति !
संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सुनुवाइ अनुमोदन गर्न नसक्दा थप अन्योल सिर्जना भएको छ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको सुनुवाइ गत बिहीबार भए पनि दुई दिन बि
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको तलब–भत्ता कति ?
काठमाडाैं, १४ भदाै । सरकारले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको तलब–भत्ता ऐनमार्फत व्यवस्था गर्न लागेको छ । संसद्को विधायन समितिको उपसमितिले यसमाथि छलफल गरिरहेको छ ।